Fikambanana - Ny Martsa Maneran-tany
Folo taona taorian'ny 1ª Martsa Manerantany ny fikambanantsika dia miverimberina mba hitohizan'ny olona maro kokoa
La Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanam-bilona Nanatontosa hetsika an-tapitrisa ao amin'ny tanàna 400 izy izay nitsidihany ny firenena 97 tao amin'ny kontinanta 5. Mihoatra ny fikambanana 2000 no nandray anjara. Roa arivo tapitrisa kilaometatra no nandeha ary an'arivony no nandray anjara.
Miaraka amin'ny traikefa voamarina sy manana fitoniana ampy amin'ny fandraisan'anjara, fanohanana ary fiaraha-miasa bebe kokoa ... Manolo-kevitra ny hanatontosa ity March 2ª ho an'ny Fandriam-pahalemana sy ny tsy Fahampiana 2019-2020 ity.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny March 1ª dia manana loharanom-baovao hanolotra anao izahay:
Afaka mandefa maimaim-poana ianao jereo ny Martsa Maneran-tany izay manangona ny sasany amin'ireo endrika miavaka indrindra amin'io asa goavana io.
Azonao fantarina amin'ny antsipiriany ny zava-nitranga tao amin'ilay tranokala tranainin'ny 1ª Martsa Manerantany
Fa inona? Ny iraka ataontsika
Ho fanoherana ny toe-javatra mampidi-doza maneran-tany amin'ny fifandirana mitombo, dia mitombo ny fandaniana amin'ny fitaovam-piadiana raha maro ny mponina no mijanona amin'ny faritra midadasika amin'ny tany noho ny tsy fisian'ny sakafo sy rano.
Mba hanohizana ny fanentanana fa ny "fiadanana" sy ny "tsy fahaiza-mandanjalanja" ihany no manokatra ny hoaviny.
Mba hampisehoana ireo fihetsika tsara sy tena samihafa izay ianjeran'ny olona, ​​ny kolotsaina ary ny vahoaka amin'ny toerana maro eo amin'ny fitantanana ny zon'olombelona, ​​ny tsy fanavakavahana, ny fiaraha-miasa, ny fiaraha-monina am-pilaminana sy ny tsy fanavakavahana.
Hanome feo an'ireo taranaka vaovao izay te-haka sy hamela ny marika, hametraka ny kolontsain'ny tsy fahazakana ny saina amin'ny saina, amin'ny fampianarana, politika, eo amin'ny fiaraha-monina ... Toy izany koa, tao anatin'ny taona vitsivitsy dia fanentanana momba ny tontolo iainana
Ny ekipa Promoter (EP) izay azo avy amin'ny hetsika sy tetikasa izay natsangana avy amin'ny sehatra sosialy, miaraka amin'ny fanahy izay "samy miahy izay tadiaviny".
Any amin'ireo firenena manana PD any amin'ny tanàna maro dia hisy ny vondron'olona iray mampiroborobo ny firenena. Amin'ity EP ity, misy fikambanana maro be azon'ny olona handraisana anjara.
Ireo EP ireo dia homena ho endrika sy fomba fiasa amin'ny fomba fiasa, fiaraha-miasa sy ny marimaritra iraisana mba handrindrana hetsika.
Fitaovana fanohanana (PA)
Izy ireo koa dia ahitana olona, ​​vondrona ary orinasa.
Ireo dia sehatra iraisam-pirenena izay misongadina kokoa sy betsaka kokoa noho ny EPs, izay ahafahana mandray anjara marobe maro, ohatra ny sectors (mpampianatra, tanora, vehivavy) na toerana (tanàna, tanàna, oniversite), sns.
Ny PA dia mila manana solontena na rohy amin'ny EP ao an-tanàna.
Mba handaminana ny fahasamihafan'ny hetsika, ny kalandrie ary ny fitsangatsanganana dia ilaina ny sehatra iraisam-pirenena iraisam-pirenena.
Oviana ary taiza?
La 2ªMM hanomboka Madrid el 2 Oktobra, 2019, Andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy filaminana, folo taona aorian'ny 1ªMM. Hiala amin'ny lalana Afrika, Amerika Avaratra, Afovoany sy Atsimo, to jump to Oseania, mandehana Asia ary farany Eoropa mahatratra Madrid ny March 8 an'ny 2020, Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy. Rehefa avy nameno ny planeta nandritra ny andro 159. Tombanana amin'izany 2ªMM Hanaraka ny firenena 100 izany ary mpikatroka an'aliny an'arivony no handray anjara amin'ity hetsika manerantany ity.